कथाः -ऋषि शान्तिप्रिय जेठको महिना । सत्र ठाँउमा हिलो बाटोमा मोटर साइकलमा पछारिदै र उठ्दै अफिस पुगेको थिएँ । माई नगरपालिका वडा नं. ७ को कार्यालयमा काम गर्न थालेको करीब तीन वर्ष भैसकेको थियो । […]
(कविता) – निरज आचार्य गनाएको छ डुङ्डुङ् हावामै मिसिएको मृत्युका कणहरु सन्त्रासमा, कोठाभित्र उकुसमुकुस सिंगो शहर हरदिन सरकारले जारी गर्ने सूचनामा मृत्य गनेर बसेका छन् । आफन्तका लागि एक ‘सिलिण्डर’ श्वास खोज्न नसकेर एक ‘भायल’ […]
कविता – आरती आचार्य जीत के हो ? कतिपटक हारेपछि जितिन्छ ? गन्तव्य के हो ? पाइलाहरुले कतिसम्म दूरी नापेपछि गन्तव्यमा पुगिन्छ ? त्यहाँ पुग्न कतिपटक लड्नु पर्छ ? कतिपटक लडेपछि पाइला गन्तव्यमा पुग्न मजबुत […]
कविता – विवश बलिभद्र कोइराला आमा यतै छिन् यतै छन् उनले बा पछि जोडेका दुःख सुख साट्ने साथी र दौतरीहरू । भन्छिन् तैंले सहरमा जोडेको घर पटकै पिच्छे अलमलिन्छु र, हराइरहन्छु किन बनाको ? यसरी […]
– प्रजिता शिवाकोटी बाटो सारै सजिलो लागे जस्तो हुन्छ, तर हिंडेर विद्यालय जाँदा कहाँ त्यस्तो हुन्छ र ? डडेल्नोमा पुस्तकहरुको भारी दश किलो भए जस्तो हुन्छ । घामले पनि कुनै पाप गरेर नर्कमा पापी व्यक्तिलाई […]
कविता – कुमार भट्टराई सातै रङ मिलेपछि आँखामा भ्रम हुन्छ सायद त्यसैले त रङ नछुट्टिएर सेतो हुन्छ । सेतो हुनु राम्रो हो भने जीवन सेतो होस् तर सेतो हुँदा पनि कहिलेकाहिं जीवन जीवन नै होइन […]